Tasko: Inguva yekushandisa kunze kweMabasa Ekushambadzira | Martech Zone
Tasko: Inguva yekushandisa kunze kweMabasa Ekushambadzira
Svondo, Kubvumbi 16, 2017 Muvhuro, April 17, 2017 Douglas Karr
Kwemakore, takaona kuti zvinotarisirwa zvinowanzo wanda nevatengi vedu asi mutengo wekubata usina. Muchokwadi, gore rakapera isu takapedza ingangoita 15% gore pamusoro pegore pane rekuwedzera basa revatengi vedu. Izvo zvingadai zvakave zvakanaka dai taive nezviwanikwa, asi isu hatina kungoita. Isu taifanira kuita shanduko dzakakomba kana isu taitarisira kuchengetedza yedu agency ine hutano.
Imwe sevhisi yakasvika kwatiri yaive Tasko. Tasko akavaka yakasarudzika manejimendi manejimendi manejimendi, akaidyisa netarenda, uye akashandisa yakasimba robhoti yematanho ekuongorora chimiro kwariri. Mhedzisiro yacho rave rakavimbika uye rakaringana basa manejimendi manejimendi izvo zvakakonzera 99% kugutsikana kwevatengi chiyero.
Takasarudza kuisa iyo system kuyedza kune mumwe wevatengi vedu, an Indianapolis kudzora zvipembenene kambani. Kunyange isu takanga takatarisana nezvakadzama zvinyorwa uye mifananidzo pamhando dzezvipuka zvavakashanda pairi, isu takafunga kuti zvingave zvakanaka chaizvo kana tikakwanisa kutumira chokwadi-zuva nezuva pamashopu avo enhau. PaTasko, takaraira maawa makumi matatu enguva yekutsvagisa uye nekuwana huwandu hwakanangana netupukanana hwezvipembenene chaizvo uye takatsanangura huwandu uhu hunofanirwa kunge huri mugore rapfuura.
Kwete chete isu takakumbira iyo data, isu zvakare takakumbira iyo yakadzoserwa faira kuti iiswe fomati kuti ipinde mukatiHootsuite 's hombe scheduler. Kwapera vhiki, takagamuchira faira redu uye rakanga rakanaka! Mukati, takaita zvigadziriso zvidiki kune nguva tupukanana nemwaka kuti tiwedzere kubatanidzwa nemifananidzo yakatarwa kune yega yega yekuvandudza. Mhedzisiro yacho ndeyekuti isu taive nechinhu chimwe chechipembenene pazuva chakarongerwa kwegore rese paTwitter, Facebook, neGoogle +!
Ndiwo mumwe chete muenzaniso wekuti Tasko ingashandiswa sei, asi isu tinotenda iko kushandiswa kwakanaka! Zvakajairika kushambadzira rutsigiro mabasa ayo anowanzo kumbirwa ari kuratidza anotungamira, anovandudza mamazita ekutaurirana, kugadzira izvo zvemagariro midhiya, kuratidza vanoita sarudzo, kana kuparadzira zvirimo online.
Heano mamwe Ekushambadzira Mabasa Tasko akaita:
Tsvaga akakodzera mazita paLinkedIn, tsvagurudza ruzivo rwekuonana uye wedzera matsva matsva muCRM.
Rekodha mazana matanhatu inotungamira mune rakashambadzirwa rekutengesa based geographic nzvimbo uye zita rebasa.
Wedzera zvigadzirwa, zvinosanganisira ruzivo, tsananguro, pics nezvimwewo kune yangu Shopify account.
Sarudza iyo yepamusoro gumi mapikicha akagovaniswa pa Instagram mukati mekupedzisira makumi maviri nemaviri maawa akamakwa ine yakatarwa hashtag.
Kugadzira indekisi yekutanga kweGerman akagamuchira Series Mbeu kana Series A mari mumwedzi gumi nemaviri yapfuura iyo isina mobile application.
Ipa runyorwa rweSweden mawebhusaiti ane Alexa chinzvimbo pazasi pe20k, inotsigira Chirungu, uye inotsigira kushambadzira kuiswa.
Nyora kubvunzurudza (chinguva che2: 28: 00)
Gadzira hurukuro dze Facebook Messenger bot.
Digitize akawanda mapeji ezvinyorwa zvakanyorwa nemaoko ezviitiko muIzwi Gwaro. Simbisa chero chinhu chisinganzwisisike uye unamate mumadhirowa.
Mutengo uri nyore - $ 5 US paawa yekuburitsa zvakajairika uye $ 10 US paawa yekuburitsa pachena.
Raira Basa paTasko
Tags: kutsvagisa kwekushambadzirabasa rekushambadziramabasa ekushambadziratasko
Uri Pamwe Kupedza Yakawedzerwa Nguva Kugadzirisa Dhata Kupfuura Kushambadzira